Nhau - Kuwedzera kwemitengo uye kukwana kukwana purofiti, graphite electrode mitengo ichiri kutarisirwa kukwira.
Kuongorora kweMusika: Graphite electrode musika mitengo yakaramba yakagadzikana vhiki ino. Vhiki rino, mutengo wepasi-sarufa petroleum coke, iyo yekumusoro yakatsvuka zvinhu zve graphite electrode, yakamira kudonha uye kugadzikana. Izvo zvakashata zvinokanganisa pane yakasvibirira pamusoro pe graphite electrode yakaneta, uye iyo yekumirira-uye-kuona maitiro eiyo graphite electrode musika yakareruka zvishoma. Pasi pekumanikidzwa kwemitengo yakakwira yesero coke uye marasha pombi, zvinova izvo zvigadzirwa zve graphite electrode, mazhinji emakambani makuru e graphite electrode akasimbisa mazwi avo. Pamusoro pezvo, svondo rino graphite electrode yakadzika yemvura yemoto simbi ichiri ine yakakwira yekushanda, uye iyo graphite electrode inongoda kugadzikana. Mazhinji emakambani makuru e graphite electrode akataura zvakare kuti kutumira kwekambani kwakagadzikana. Zvinogona kuonekwa kuti graphite electrode inoda divi rutsigiro ichiripo.
Kupa: Iyo graphite electrode musika yakachengetedza yakasimba kugovera vhiki ino. Vhiki rino, kugoverwa kwe-ultra-high-power small and medium-sized graphite electrode mumusika we graphite electrode wakaramba uchisimba. Chikonzero chikuru ndechekuti makambani makuru e graphite electrode anoburitsa yakawanda-yepamusoro-simba uye yakakura-saizi graphite electrode. Diki uye yepakati-saizi graphite electrode account yeiyo diki yekugovana mugove, uye nekuda kwekudzikira kwekuda kwekushandisa, musika kuwanda hakuwanikwi. Nekuwedzera, kugoverwa kwemadiki uye epakati-saizi graphite electrode ichiri yakasimba.
Kudiwa divi: Iyo graphite electrode yemusika kudiwa divi yakachengetedza yakanaka yakazara kuita vhiki ino. Vhiki rino, mwero wekushanda kweChina yemagetsi svutugadzike simbi inomera yakaramba iri padanho repamusoro. Nerutsigiro rwekuomarara kwekuda, manzwiro pakutengwa kwema graphite electrode aive akanaka. Uye zvakare, zvinoenderana nemhinduro kubva kumakambani emagetsi e graphite, kunyangwe hosi yekutakura ngarava yakaramba iri padanho repamusoro munguva pfupi yapfuura, kuomeswa kwezvikepe zvekutumira kunze kwadzikira, uye kuita kwese kwe graphite electrode kunze kwenyika kwave kuvandudza.
Panyaya yemutengo: Mari ye graphite electrode yakaratidza kuwedzera kwevhiki ino. Mutengo wepasi-nesarufa petroleum coke wakamira kudonha uye wakadzikama svondo rino, uye kukanganisa kwakashata pa graphite electrode mbishi yezvinhu kumusoro kwakadzikira; mutengo wenzara coke wakaramba wakakwira svondo rino, mutengo wemarasha pari wakaramba uchikwira, uye mutengo wema graphite electrode wanga uchiri kuwedzera.
Panyaya yemubatsiro: Iyo yakazara purofiti yeiyo graphite electrode musika ichiri kukwana vhiki rino. Iyo graphite electrode yemusika mutengo yave ichimhanya zvakatsiga munguva pfupi yapfuura, uye iko kuyerera kwekuwedzera kwemutengo kuchiri kutsimbirira iyo mhedzisiro margin yeiyo graphite electrode musika.
Panyaya yekuverenga: Iko hakuna kunyanya kuwanda kwekuunganidza kuwanda mumusika we graphite electrode svondo rino. Svondo rino, makambani mazhinji emagetsi e graphite ane kugadzikana kwekugadzira, uye kuderera kwekudzika kwema graphite electrode kwakangogadzikana, uye hapana kuunganidzwa kwehuwandu hwakawanda mumusika. Mamwe makambani makuru e graphite electrode airatidzira kuti vaizochengeta chikamu cheyakajairika mari yekutora, uye mamwe madiki uye epakati-epakati graphite makambani emagetsi akaratidzira kuti kambani iyi yaive isina yekuverenga.
Forecast: Mari ye graphite electrode musika inoramba yakakwira svondo rino, uye mutengo wepasi-sarufa petroleum coke wakadzikama, uye mutengo we graphite electrode rutsigiro uchawedzera. Mune mamiriro ekuti purofiti yakazara ye graphite electrode musika ichiri kukwana, mutengo weiyo graphite electrode musika ichine mukana wekusundira kumusoro, uye inotarisirwa kuwedzera ne1000 yuan / tani.